မိန်းမထုကြီးကို အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ကွာရှင်းကြမယ့်အတူတူ အစထဲက မယူကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ခြူးစစ်ဟန် – Suehninsi
မိန်းမထုကြီးကို အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ကွာရှင်းကြမယ့်အတူတူ အစထဲက မယူကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ခြူးစစ်ဟန်
အနုပညာကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ ဝါသနာပါရာ အနုပညာခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းရင်း ဘဝကိုအကောင်းမွန်ဆုံးတည်ဆောက်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ Miss Golden Land Myanmar 2015 ရဲ့ Miss Face Of Beauty Title ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လည်း
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှုကို ရရှိထားပေမယ့်လည်း အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသေးဘဲ မိဘကိုပဲ လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့
သမီးလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခြူးစစ်တစ်ယောက် နေ့စဉ်ကြားနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်လေးကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ” ယောကျာ်းတွေယူပြီး ကွာရှင်းရတာနဲ့ ပြတ်စဲရတာနဲ့…. ဘာတွေမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး
စိတ်တွေတောင်ပြတ်လာပြီ…. နောက်လည်း ကွာရှင်းကြမှာခြင်းအတူတူ ယူမနေပါနဲ့တော့…. ယောကျာ်းတွေကို နော် အမျိုးသမီးထုကြီးရေ…. အာ့ရှင်တို့ယောကျာ်းတွေမကောင်းလို့” လို့ဆိုပြီး မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာတောင်
အိမ်ထောင်ရေးပြတ်စဲမှုသတင်းတွေကို ဆက်တိုက်မြင်တွေ့လာရတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… ခြူးစစ်ဟန်ကတော့ နောက်လည်း ကွာရှင်းကြမယ့်အတူတူ ယူမနေပါနဲ့တော့ အမျိုးသမီးထုကြီးရေ ဆိုပြီး အရွှန်းဖောက်ကာမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ ပရိသတ်ကြီးရော ခြူးစစ်ဟန်ရဲ့စကားကို သဘောတူရဲ့လား။
အနုပညာကြောငျးဆငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခွူးစဈဟနျကတော့ ဝါသနာပါရာ အနုပညာခရီးလမျးကိုလြှောကျလှမျးရငျး ဘဝကိုအကောငျးမှနျဆုံးတညျဆောကျနသေူတဈယောကျပါ။ Miss Golden Land Myanmar 2015 ရဲ့ Miss Face Of Beauty Title ဆုရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ မွနျမာအိုငျဒေါ Season-4 သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ ဆနျခါတငျစာရငျးဝငျ ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျလညျး
ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခွူးစဈဟနျကတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ခြောမောလှပတဲ့မကျြနှာကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ပုရိသတှရေဲ့ဝနျးရံအားပေးမှုကို ရရှိထားပမေယျ့လညျး အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစားမှုမရှိသေးဘဲ မိဘကိုပဲ လုပျကြှေးပွုစုနတေဲ့
သမီးလိမ်မာလေးတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော။ ဒီနမှေ့ာတော့ ခွူးစဈတဈယောကျ နစေ့ဉျကွားနရေတဲ့ အိမျထောငျရေးကှာရှငျးမှုသတငျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး သူ့ရဲ့အမွငျလေးကို မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။ ” ယောကျြားတှယေူပွီး ကှာရှငျးရတာနဲ့ ပွတျစဲရတာနဲ့…. ဘာတှမှေနျးကိုမသိတော့ပါဘူး
စိတျတှတေောငျပွတျလာပွီ…. နောကျလညျး ကှာရှငျးကွမှာခွငျးအတူတူ ယူမနပေါနဲ့တော့…. ယောကျြားတှကေို နျော အမြိုးသမီးထုကွီးရေ…. အာ့ရှငျတို့ယောကျြားတှမေကောငျးလို့” လို့ဆိုပွီး မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ အနုပညာရှငျအသိုငျးအဝိုငျးမှာတောငျ
အိမျထောငျရေးပွတျစဲမှုသတငျးတှကေို ဆကျတိုကျမွငျတှလေ့ာရတာကတော့ စိတျမကောငျးစရာပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ… ခွူးစဈဟနျကတော့ နောကျလညျး ကှာရှငျးကွမယျ့အတူတူ ယူမနပေါနဲ့တော့ အမြိုးသမီးထုကွီးရေ ဆိုပွီး အရှနျးဖောကျကာမြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုလဲ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရော ခွူးစဈဟနျရဲ့စကားကို သဘောတူရဲ့လား။
Source : Chuu Sitt Han’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
ရွှေပလ္လင်မိသားစုရဲ့ သိန်း(၇၅၀)ကျော် အကုန်အကျခံပြီး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကြက်သီးထစရာအလှူကြီးကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ မောင်မောင်အေး
မိဘနှစ်ပါးကို ကိုယ်ကိုတိုင်ထက် ပိုပြီးတော့ စိတ်ပူရကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်